Baradhadu waxaa laga guranayaa Kabardino-Balkaria - Nidaamka Baradhada
Waxaa sawiro RIA "Kabardino-Balkaria"
Kabardino-Balkaria, baradhada waxaa laga qoday dhul dhan 2,7 kun hektar, ama 33% qorshaha, adeegga saxaafadda ee wasaaradda beeraha jamhuuriyadda ayaa yiri.
Waqtiga xaadirka, goosashada "rootiga labaad" waxaa lagu fuliyaa shan gobol oo ka tirsan jamhuuriyadda. Maanta, celceliska soosaarku waa 209 c / ha ama 104% isla muddadaas oo kale sanadka 2019. Soo-goynta guud ee baradhoku waa 57 kun oo tan.
Beeralleyda ayaa guran doona inta badan baradhada xilliga dayrta; waa dalaggan oo loo diyaariyey kaydinta xilliga qaboobaha.
Sannadkan baradhada ahi waxay dagan yihiin 8,3 kun oo hektar, taas oo ah heer sanadkii la soo dhaafay. Sanadka 2019, goosashada guud ee baradhoku wuxuu noqday 196 kun oo tan. Sannadkan goosashada baradho ayaa la filayaa inay ugu yaraan noqoto sanadkii hore.
Tags: Kabardino-Balkariasaadaasha goosashadagoosashada baradho